Remix Mini: Ihe oru ngo a na-achọ ime ka Android gaa na PC | Site na Linux
Remix Mini: Ihe oru ngo a na-achọ iji weta gam akporo na PC
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Ndị ọzọ
Ọtụtụ ndị ọrụ chọrọ naanị sistemụ arụmọrụ iji rụọ ọrụ ndị kachasị mkpa. Iji lelee email, ebe nrụọrụ weebụ kachasị amasị anyị, lee ihe nkiri ma ọ bụ gee egwu, ọ bụchaghị anyị nwere kọmpụta dị ike, ma ọ bụ ụdị sistemụ mgbagwoju anya dị otú a.
E wezụga Windows, OSX, UNIX, BSD (na nkwekọrịta) na GNU / Linux, e nwere ụdị sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ nọ na ịrị elu kemgbe ọbịbịa Smartphone, yana gam akporo na iOS bụ ndị kachasị ewu ewu n'oge a. A gam akporo, ịbụ onye kacha emeghe na nke a, ka ewere iji mepụta ụfọdụ ọrụ na-enye anyị ohere ịme ya na mpụga ekwentị. Na SiteLinux ugbua anyị ekwuola banyere ya, na otú ahụ ka ụmụ okorobịa si Tecnología.netna a magburu onwe ya isiokwu.
Naa nwere ike ịbụ ihe. Nke a bu motto nke oru ohuru nke di na uzo Crowfounding in Kickstarter, na nke ahụ na-ekwe nkwa inye anyị kọmputa na gam akporo 5 na ndabara, na-eji ihe mara mma na teknụzụ ọhụụ, ma ọ bụ na opekata mpe karịa. Maka nke a, ha ji ndụdụ a na-akpọ Remix OS.
N'ezie, ugbu a ị nwere ike ịzụta ntinye Remix Mini site na Kickstarter, ya bụ, na obere nchekwa na obere RAM maka naanị $ 30, ebe ọ bụ na ha na-enye ụdị nke $ 20 nke e rere.
N'akụkụ nke njikọta Remix Mini dị ka ihe eji arụ ọrụ nwere ihe niile, kwuo WIFI, Bluetooth, LAN na ọdụ ụgbọ USB. Ihe oriri ike a niile na-ekwe ọchị.
Eji m obi m niile na ọ bụ ọrụ na-atọ ụtọ, ọkachasị maka ndị gam akporo gam akporo nwere ike ịnwe na ekwentị ha na kọmputa, na -elekwa uru na ọrụ Google na-enye maka sistemụ arụmọrụ ya. Tụle na ọtụtụ nhọrọ iji na-agba ọsọ ma ọ bụ i applicationsomi ngwa gam akporo dabere na ndọtị ma ọ bụ ihe nchọgharị weebụ, echere m Remix Obere ọ bụrụla ngwaahịa pụrụ iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ndị ọzọ » Remix Mini: Ihe oru ngo a na-achọ iji weta gam akporo na PC
Ka anyị ghara ichefu gam akporo x86 🙂 Ọ bụkwa ọrụ ọzọ na-aga ebe ahụ, mana ha nwekwara ihe ịchacha 😀
Zaghachi Francisco Medina
ome ochi dijo
ọ bụrụ na nke ahụ bụ “tebụl,” ọ bụ ihe ngosi.
M ji gam akporo x86 na ọ bụ dịtụ iru ala, n'ihi na scrotum, ma offimatic ngwa na ndị ọzọ na gam akporo nwere bụ nnọọ ala iji site na PC
Zaghachi ka ome ochi
Echere m oche, taa enwere m nsogbu.
Abanyela m oru ngo ahụ ahụla m mbadamba nkume ahụ, ọ dịghị ihe na-enwere ndị MS anyaụfụ
Ì ji n'aka ihe ị na-ekwu?.
Have nwere MS mbadamba na otu na Remix OS iji tụnyere….
... ebe ọ bụ na m nyere echiche m, otu echiche.
N'etiti ọtụtụ TVs ndị jọrọ njọ na nke nwere nsogbu, ndụdụ a maka PC dịpụrụ adịpụ na nke ọma, imewe ahụ mara mma karịa Lollipop na ọtụtụ ndị ọzọ nwere ike iji rụọ ọrụ na monitors. Nnukwu ngwaahịa.
Echere m na echiche nke "mgbọrọgwụ", "xposed" na ihe ndị yiri ya anaghị arụ ọrụ na ngwaọrụ a, ka ha na-eme?
Achọrọ m ka anyị nwee desktọọpụ dị ka nke ahụ na Linux
Anyị nwere kọmpụta kọmpụta dị mma karịa ugboro atọ na Linux
Amir chukwu dijo
Ọ bụ okwu nke iwere desktọọpụ ma gbanwee ya na uche ya.
Zaghachi Amir Torrez
merlin ndị debianite dijo
O bu nkem ka o di ka gnome3?
Akwa XD a.
Zaghachi iji merlin debianite
Banyere teknụzụ ekwentị mkpanaaka na Linux, enweghị ọganihu, enweghị ihe ọ bụla na-atọ ụtọ, ị nweghị ike ịmalite ngwa nke aka gị maka nzukọ ọgbakọ na ntanetị na vidiyo ozugbo.
Ruo ugbu a ọ dị mma. Ọ nwere interface mara mma na ngwaike ngwaike mara mma ... Ọ ga-adị mkpa ịhụ ma ọ bụrụ na ihe niile dị ọcha ma ọ bụ na ọ bụ ọrụ nke anyị nwere ike iji.
Ọ ga-amasị m ịnweta ohere ịnwale ya ekele
Escaped gbapụrụ njehie a: «Remix Mini na-ahụ dị ka ngwaahịa pụrụ iche.» ma ọ bụ na m na-ezighị ezi.
uBlock, free na ibu fechaa ọzọ na adBlock Plus